Maxamed Saalax ayaa SABAB u ah ILINTII ka Qubatay Sadio Mane….(Laacibka Liverpool oo la Aamusin waayay) Sidee wax u jiraan???? – Gool FM
Maxamed Saalax ayaa SABAB u ah ILINTII ka Qubatay Sadio Mane….(Laacibka Liverpool oo la Aamusin waayay) Sidee wax u jiraan????
Byare November 18, 2018
(Africa) 18 Nof 2018. Sadio Mane ayaa garoonka laga saaray isagoo waliba si aad ah u ilmeenaya ciyaartii uu xulkiisa Senegal 1-0 uga adkaaday xulka Equatorial Guinea isreeb reebka koobka Qaramada Afrika.
Inkastuu adkaaday xulka Sengal misane taageerayaasha xulka ayaa si xun ugu ooriyay dhaliyaha reer Liverpool taa oo keentay inuu ooyin jabsado.
Laakiin warar ka imaanaya gudaha dalkaasi ayaa tibaaxaya in Ooyinta Mane ay Sabab u tahay Xifaaltanka uu kula jiro xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Maxamed Saalax.
Mane ayaa khasaariyay fursad uu 2-0 uga dhigi karay ciyaarta taa oo keentay inay ku ooriyaan taageerayaasha xulkiisa inta ka dhiman ciyaarta.
Dhaliyaha Liverpool ayaa ooyin jabsaday oo waxaa garoonka ka saaray saaxiibadiisa iyadoo ay wajiga u saaran tahay maaliyada, waxaa xitaa la sheegayaa inuu markale jilbaha dhigtay ooyin darteed.
Yeelkeede, warar ka imaanaya gudaha dalkaasi ayaa warinaya in Ooyinta Mane aysan Sabab u ahayn oo kaliya oorinta Taageerayaasha ee waxaa Sabab u ah Xifaaltanka uu kula jiro Maxamed Saalax.
Xiddiga reer Masar ayaa afar gool dhaliyay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay isreeb reebka koobka Qaramada Afrika halka Mane uu ilaa hadda wax gool ah dhalin.
“Waa dhif iyo Naadir in la arko wadan Neceb xiddiga dalkooda sidiina oo kale,” Mane walaalkii ayaa sidaa ku soo qoray boggiisa Instagram.
“Masar oo dhan waxay taageerayaan Maxamed Saalax haddii uu si fiican ama si xunba ugu ciyaarayo xulka qarankiisa.
“Kumanaan taageerayaal oo reer Masar ah aayaa taageeraya Saalax, halka taageerayaasha Senegal aysan marna taageereyn Sadio Mane kaa oo kubbada Dahabka kula loolamaya Maxamed Saalax.
“Mane waa uu sii wadi doonaa inuu idin dagaalamo, wuu sii wadi doonaa inuu nafta idin huro wuuna sii wadi doonaa inuu tiisa ugu badan siyo Senegal isla markaana uu sii jeclaado uuna tixgaliyo Calanka dalka.
“Maalin ayaad ogaan doontaan midaa, laakiin waxaa la arkaa inay noqoto waqti ay xeero iyo fandhaal kala dheceen.”.
Laacibkii hore ee xulka qaranka Germany oo ku eedeeyay Guardiola hoos u dhaca ku yimid wiilasha Joachim Löw
Xulka England oo u Gudbay Afar Dhammaadka Uefa Nations League kaddib Guul ay ka gaareen Croatia.